အကောင်းဆုံး Flat Wire Coil Spring ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Flat Wire Coil Spring စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
Tong Na Enterprise Co., Ltd. အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့သည် Taiwan Flat Wire Coil Spring ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံတွင် Hi-tech ကိုစက်ပစ္စည်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အလွန်နောက်ဆုံးပေါ်ထည့်သွင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပေါ်တိုးတက်စေရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖောက်သည်များကမျှော်လင့်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုစံချိန်စံညွှန်းထက်ကျော်လွန်ကြောင်းအာမခံရောက်နေပါတယ်။ Customer များအဆန်းသစ်ဆုံးနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်လက်ခံရရှိစိတ်ချကြသည်။ ရန် hesitance မ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု။
Flat Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ အလွယ်ကူဆုံး တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။,ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာသည် အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။,အရည်အသွေးအလွန်တည်ငြိမ်သည်။,ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ OEM ကားစက်ရုံများသို့တင်ပို့သည်။.
3Q32 Volute Spring,၃.2*ကားထိုင်ခုံထောင့်ချိန်ညှိကိရိယာအတွက် 15mm Flat Spring,ဆန့်ကျင်သည်။-သံချေးဆီ
နွေဦးဖွဲ့စည်းခြင်းသို့ လှိမ့်ကာ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ ပစ္စည်းများ.ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းနှင့် နမူနာများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။.
ပစ္စည်းကို ထိုင်ဝမ် China Steel မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါသည်။.
TS16949 နှင့် ISO90001 နှစ်ခုလုံးကို လက်မှတ်ရထားသည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/flat-wire-coil-spring.html
အကောင်းဆုံး Flat Wire Coil Spring ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။